Hambalyo Qof walba
Hambalyo Qof walba sano 2 10 bilood ka hor #724
Waxaan ku cusubahay hareeraha halkaan bogga intarnetka.
Wakhti aad u dheer waxaan ahay qof taageersan raadka simanator 2004, wali waxaa jira waxyaabo badan oo la ogaan karo.
Waxaan ku soo aragnay boggan ka dib markii aan googledey diyaaradaha ugu fiican.
Waxay ahayd wax cajiib ah waxa aan helay halkan.
Sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa in aan u mahadceliyo aad u badan tayada sare ee qalabka freeware.
Hambalyo Qof walba sano 2 10 bilood ka hor #726
Hello iyo soo dhawow Rikoooo.
Hal weyn ayaan kaaga mahadcelinayaa dhammaan ereyada noocaas ah. Qaabka aan ku imaado halkan wuxuu ahaa mid la mid ah kanaga. Waan joogaa FSX hadda laakiin waqti aad u dheer, Waxaan sidoo kale ku jiray FS2004, oo aan haba yaraatee wax xun ahayn.
Waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican ee aan kuugu sameyn karno halkaan sida ugu fiican ee suurtogalka ah.
Mar labaad, mahadsanid aad iyo aad u soo dhawow.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Leocha1
Hambalyo Qof walba sano 2 10 bilood ka hor #741
Waxaan jecelahay inaan ku mahadnaqo dhammaan wixii ku soo kordhay barnaamijyada xorta ah ee aad siiso, waxaan bilo badan isticmaalay bartaada internetka waana inaan ku mahadin karaa ka hor laakiin waxa kale oo jira waxyaabo kale oo jira iyada oo guud ahaan la eegayo diyaaraddaha iwm waxaan imid. Qof kasta oo iibinaya (Diyaaradda Lacag la’aanta ah) sidaa darteed waan u diray oo waxaan weydiiyay inay runtii yihiin kuwo bilaash ah maxaa yeelay waxaan haystay isla diyaaradihii uu bixinayay, waxaanan la yaabay inay runtii yihiin kuwa bilaash ah ama lacag-siin ah ayuu ku jawaabay oo wuxuu igu yidhi waa bakhaar bilaash ah ayuu yidhi muhiimad ahaan xirmo bilaash ah oo bilaash ah hal xirmo. Haddase ilama muuqato aniga aniga ila qumman, inaan soo jaro dhammaan dadka naqshadeeyey oo daabacday diyaaradan.
Waxaa laga yaabaa in aan ganacsigeyga midna lahayn laakiin shakhsiyan waxaan u maleynayaa in ay gebi ahaanba qaldan tahay, waxaan dareemayaa in aysan aheyn sharci sharci ah ma ogaanayo waxaan rabaa in aan dadka uga digo tan oo dhan diyaaradaha ku yaala dhakada ayaa laga heli karaa Rikoo ama qaar Ee goobaha kale ee download.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.237